Sat, May 30, 2020 at 2:15am
काठमाडौँ, १९ साउन । यूएनपार्क परिसरभित्र ज्वागलमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले ‘पम्प स्टेसन’ बनाएको छ। स्टेसनले जमिनमुनिको पानी तानेर शुद्धीकरण गरी उपभोक्ताको घरमा पठाउँछ। फलामको मात्रा धेरै भएकाले पानी पिउन योग्य छैन। तैपनि उपभोक्ताकहाँ पानी पठाउनै पर्ने बाध्यता छ। दैनिक कम्तीमा दुई घण्टा पानी वितरण गरिन्छ। धाराकै पाइपबाट पठाउने पानी घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र हुने केयूकेएल बताउँछ। घरायसी प्रयोजनका लागि..
जुम्रा मार्ने विवादमा कैदीको मृत्यु
काठमाडौँ, १८ साउन । नख्खुस्थित कारागारभित्र शुक्रबार दिउँसो दुई जना कैदीबीच जुम्रा मार्ने विषयमा विवाद हुँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका बर्दियाका २५ वर्षीय पूर्णबहादुर राजीको मृत्यु भएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अर्का कैदी सर्लाहीका ५० वर्षीय पवनकुमार महतोले राजीमाथि सिमेन्टको ब्लकले आक्रमण गरी सख्त घाइते बनाएका थिए । राजीको उपचारका लागि वीर अस्पताल ट्रमा सेन्टरमा ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको..
काठमाडौँ, १८ साउन । वारि उल्टाखाम जाने कालोपत्रे सडक। सडककै किनारमा पानी बगिरहने दुई फिट गहिरो नाला। नालाको दुवै किनारमा बाक्ला जामुनका बोट। पारिपट्टि गुज्जमुज्ज उखुबारी। उखुबारीको करिब एक किलोमिटर वरपर सुनसान खेतबारी। हो, त्यही उखुबारीमा अघिल्लो साउन ११ गते बिहान उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा उखुबारीको घारीभित्र शव भेटिएपछि त्रासले गर्दा महिला..
काठमाडौँ, १८ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको आठ महिना भयो । करिब ९७ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा भए संघीय राजधानीका लाखौं बासिन्दा पिउने पानीको दैनिक समस्याबाट मुक्त हुने थिए । तर उपत्यकावासीलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउने जिम्मा पाएको खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेकी मन्त्री बिना मगरको प्राथमिकता भने मेलम्चीमा भन्दा अन्तै बढी भएजस्तो देखिएको छ..
काठमाडौँ, १७ साउन । सदरमुकाम बागलुङ बजार कटेर पश्चिम लागेपछि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको दयनीय अवस्था आँखाअघि आउँछ । वर्षायाममा त लोकमार्ग झन् ‘बेहाल’ देखिन्छ । पहिरो छल्दै, हिलो छिचोल्दै यात्रा गर्नुपर्छ । घोडाबाँधे नपुगुञ्जेल सास्ती घट्दैन । त्यतिञ्जेल २५ किमी यात्रा तय भइसकेको हुन्छ । त्यहाँ पुगेपछि भने केही राहत महसुस हुन्छ । थकित बनेका यात्रुले सन्तोषको सास फेर्छन् । काठेखोला गाउँपालिकाको..
काठमाडौँ, १७ साउन । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको लैनचौरस्थित निजी निवासमा सैनिक कामदार छैनन् । आमा–बुवा सोही निवासमा बस्दै आउनुभएकाले सुरक्षार्थ सैनिक गार्डहरू खटाइए पनि कामदार कर्मचारी देखिँदैनन् । उहाँको निवासभन्दा करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको एक अर्का उच्च सैनिक अधिकारीका घरमा मूलढोकादेखि भान्सासम्म पाँच जना सैनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू घरको सरसफाइदेखि भात पकाउनेसम्म घरेलु कामदारका रूपमा..
काठमाडौँ, १७ साउन । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भूमाफियाको योजना अनुसार केही राजनीतिक दलका नेता, विचौलिया र टाठाबाठा मिलेर हडप्न खोजेको खुलासा भएको छ । पत्रकार सम्मेलन गरी श्री स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठानले जग्गा हडप्ने योजना अनुसार गुठी विधयेकमा गम्भीर विषयहरु समावेश गरिएको समेत बताएको छ । श्री स्वर्गद्वारी आश्रमका सचिव ध्रुवश्रीले जग्गामा भूमाफियाको आँखा लागेर हडप्ने गतिविधि भइरहेको बताए । उनले भने,‘स्वर्गद्वारी आश्रम..
IQ प्रश्न - खाली ठाउँमा के राख्न मिल्छ ? उत्तर ६ होइन !!
काठमाडौँ, २० माघ । कुनै आईक्यु प्रश्न यतिसम्म अप्ठ्यारो हुन्छ कि दिमाग नै घुमाईदिन्छन् । कतिपय प्रश्नले रातको निन्द्रा नै हराइदिन्छ । यो आईक्यु प्रश्न पनि यस्तै दिमाग घुमाउने छ । तपाईले याद गर्नु भएको छ ? कुनै प्रश्न यस्ता हुन्छन्, जसलाई हेर्दा अंक खोजेजस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा अंक खोजेको हुँदैन । कतिपय अवस्था झुक्याउनको लागि अक्षरमा पनि सोधेको हुन्छ । अनुमान लगाउनु..
काठमाडौँ, १६ साउन । एक दिनमा १२ घण्टा दिउँसो र १२ घन्टा राति हुन्छ भन्ने सामान्य कुरा त हामि सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तर विश्वमा केही यस्ता ठाँउहरु पनि छन् जहाँ चौबिसै घण्टा दिउँसो हुन्छ । सुर्य कहिल्यै नअस्ताउने यस्ता ठाँउलाई ‘द मिडनाइट सन’पनि भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक कारणले हुन्छ । उत्तरमा आर्कटिक र दक्षिणमा अन्र्टाटिक वृत्तमा गर्मि महिनामा चौबिसै..
हुम्ला, १६ साउन । हुम्लाको सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूतिका लागि ल्याइएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बुधबार बिहान प्रसूतिका लागि सर्केगाड स्वास्थ्यचौकीमा भर्ना भएकी वडा नं ४ साँयागाउँ निवासी २० वर्षीया अनरुपा टमटाको बिहान १० बजे मृत्यु हो । टमटालाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि बुधबार बिहान ४ बजे प्रसूतिगृहमा ल्याइए पनि दुर्गम क्षेत्रमा उपकरण नहुँदा मृत्यु भएको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख देवेन्द्रवीर मगियाले जानकारी दिनुभयो..
नयाँ कानून : अब बिहेमा ५१ जना भन्दा बढी जन्ती जान नपाइने
हेटौंडा, १४ साउन । अब विवाहमा ५१ जना भन्दा बढी जन्ती जान नपाइने भएको छ । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले विवाहमा ५१ जना भन्दा बढी जन्ती जान नपाइने व्यवस्था लागु गरेको हो । विभिन्न सामाजिक व्यवहारमा विकृति आइरहेको अवस्थामा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले सामाजिक व्यवहार ऐन, २०७५ गाउँसभाबाट पास गरी लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।जन्ती जाँदा बाजागाजासहित ५१ जना भन्दा बढी लैजान नहुने, केटा वा..
लमही, १४ साउन । दाङका ऋषि परियार विश्व कीर्तिमान तोड्ने दौडमा हुनुहुन्छ । उहाँ दुवै खुट्टामाथि पारेर गरिने ‘पुसअप’मा विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने दौडमा हुनुहुन्छ । गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा अहिलेसम्म खुट्टामाथि पारेर एक मिनेटमा ५१ पटक मात्रै पुसअप गरेको रेकर्ड छ । बेलारूसका सिर्हेई कुडायौले सन् २०१८ मे ३ मा ५१ पटक पुसअप गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए । त्यो..
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ऋण !
काठमाडौँ, १४ साउन । बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १ सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको..
वैदेशिक राेजगारमा गएका मानिसकाे श्रीमति भगाउनेलाई पाँच लाख जरिवाना
काठमाडौं, १३ साउन। श्रीमान विदेश भएकाकी श्रीमति भगाउनेलाई पाँच लाख जरिवानाको कानून बनेकाे छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती र श्रीमान श्रीमतीबीच अत्याधिक समस्या देखिन थालेपछि स्थानीय तहले साे नियम बनाएका हुन् । पाँचथरको प्रङबुङमा अचम्मको नियम बनाइएको छ। दुई वर्ष अघि स्थानीयले बनाएको नियम अहिलेसम्म पनि लागू भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रीमान विदेश जाने क्रमसँगै विकृति फैलिएको भन्दै एउटा नियम..
परमाणु बमले पनि असर नपार्ने विश्वकै सुरक्षित घर (भिडियो)
काठमाडौँ, १२ साउन । तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , पोल्यान्डमा एउटा यस्तो घर छ , जसलाई परमाणु बमले समेत केही असर गदैन् । पोल्याण्डको राजधानी वार्सामा भएको यो घर विश्वमै सुरक्षित घर हो । त्यहाँको एक जना ब्यक्तिले घर बनाउने योजना बनाएर चर्चित आर्किटेक्चर र्फम केडब्ल्यूके प्रोम्ससँग सम्पर्क गरेर सुरक्षित घर बनाउने निधो गरे । त्यसपछि उनको माग अनुसार कम्पनीले यस्तो..
नेटवर्किङ व्यवसायले घर न घाट, यसरी हुन्छ ठगी
काठमाडौँ, १२ साउन । धादिङका सरोज थापामगरलाई नेटवर्किङ कम्पनीका एजेन्टले एक वर्षमै करोडपति बनाउने विश्वास दिलाएका थिए । मासिक ४० हजार रुपैयाँ तलब, कामका आधारमा पद र तलब बढ्दै जाने बताएपछि हौसिएका उनले आफूसँग भएको र सरसापट गरेर ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २४ हजार मासिक तलब पाइरहेको जागिर छाडेर उनी कपिलवस्तुको सीमावर्ती भारतीय बजार पचपेडवा..
अख्तियार हिरासत इन्जिनियर र प्रहरीले भरियो
काठमाडौँ, १२ साउन । साउन ४ गते कर्णाली व्यवस्थापन कार्यालय बर्दियाका इन्जिनियर कमल सिटौला, इन्जिनियर विश्वेश्वरप्रसाद शाह, इन्जिनियर हरिप्रसाद चौधरी र सवारीचालक टंकप्रसाद ओझालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १५ लाख घुससहित पक्राउ गर्‍यो। तारजाली भरेको रकम भुक्तानीबापत् उनीहरूले घुस लिएका थिए। उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। -सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका सब-इन्जिनियर उमा श्रेष्ठ ५० हजार घुससहित पक्राउ..
विहारमा भेटियाे अनाैठाे ढुङ्गा, उल्का पिण्ड भएकाे आशंका
विहार, ११ साउन । भारतकाे विहारस्थित एउटा गाँउमा फुटबल आकारको एक अनाैठाे ढुंगा भेटिएकाे छ । उक्त गाउँको धान खेतमा भेटिएको ढुंगा उल्कापिण्ड भएको आशंका गरिएको छ । सीएनएनका अनुसार ढुंगालाई अहिले ‘विहार संग्राहलय’मा प्रदर्शनमा राखिएको छ । तर यसलाई तत्कालै श्रीकृष्ण साइन्स सेन्टरमा स्थान्तरण गरेर विज्ञमार्फत उल्कापिण्ड भए नभएको परीक्षण गराइने विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले बताए । हेर्दा सामान्य ढुंगाजस्तो देखिए पनि उल्कापिण्ड..
उपमेयरले हालिन मेयरविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ, १० साउन । कपिलवस्तु नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मीदेवी गुप्ताले मेयर किरण सिंहविरुद्ध मुद्दा हालेकी छिन् । उपमेयर गुप्ताले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेकी हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपमेयर हुने व्यवस्थाविपरीत मेयरले कामकारबाही अगाडि बढाएको भन्दै मेयरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्रमा छ । गुप्ताले यो..
१६ किलो सुन बरामद
काठमाडौँ, १० साउन । उत्तरी गोरखा सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । खाद्यान्न ढुवानीको एक मात्र माध्यम खच्चड हो । स्थानीय व्यापारीसमेत रहेका धार्चे गाउँपालिका केरौँजाका धनकमल उत्तरी क्षेत्रका खच्चड व्यवसायी हुन् । उनी उत्तरी क्षेत्रका व्यापारीसँग सम्पर्क गर्ने खच्चडमार्फत आरुघाटलगायतको क्षेत्रबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्थे । सधैँजसो तिब्बतका सिमानामा रहेका गाउँमा सामान पु¥याएर फर्केर बेपत्ता भएको बिहीबार २७ दिन पुग्यो । गत असार..
फेसबुकमा फाेटाे अपलाेड गरेकाे भन्दै महिला डाक्टरको लाइसेन्स रद्द
काठमाडौं, ९ साउन । फेसबुकमा फाेटाे अपलाेड गरेकाे भन्दै एक महिला डाक्टरको लाइसेन्स रद्द गरिएकाे छ । म्यानमारको मेडिकल काउन्सिलले एकजना महिला डाक्टरको लाइसेन्स रद्द गरिदिएको हाे। मोडेलसमेत रहेकी ती सुन्दरी डाक्टरले छोटो कपडा लगाएर खिचेको फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेकै आरोपमा उनको लाइसेन्स खारेज गरिएको सञ्चार माध्यमहरुले जनाइएका छन्। २८ वर्षकी नाङ मवे साङले प्रायः आफ्नो फेसबुकबाट बोल्ड तस्वीरहरु सार्वजनिक गर्दे आएकी थिईन।..
यति धेरै बोल्ड तस्बिर राष्ट्रपतिकै हो त ? यस्तो छ रहस्य !
एजेन्सी, ९ साउन । क्रोएशियाकी राष्ट्रपति कोलिन्डा ग्रबर किटारोभिचको भिडियो भायरल भएको छ । भिडियोमा उनी राष्ट्रिय टोलीसँग रुसमाथि क्वार्टरफाइनलमा मिलेको जितमा खुशी मनाइरहेकी छिन् । क्रोएशियाको झण्डावाला पोशाक लगाएकी कोलिन्डालाई संसारकै सबैभन्दा हटेस्ट राष्ट्रपति पनि भनिन्छ । नुहाइरहेकी एक महिलाको ज्यादै बोल्ड फोटो पोस्ट गरिएको थियो । जुन कोलिन्डाको भन्दै उनलाई हटेस्ट राष्ट्रपतिको ट्याग लगाइदियो । फोटो सोसल मिडियामा भायरल भएपछि पता लाग्यो..
काठमाडौँ, ९ साउन । वर्षासँगै संसद् भवनभित्र ढलको पानी पसेपछि प्रदेश १ को संसद् बैठक बुधबार स्थगन गरिएको छ। संसद् भवनमा ढलको पानी पसेर जलमग्न भएको थियो। शौचालयको हजमा समेत पानी भरिएर बैठकस्थलमै जमेका कारण प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरिएको हो। सभामुखले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले चौथो तथा बजेट अधिवेशनको २७ औं बैठक नबस्दै स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार बिहानबाट..
काठमाडौँ, ९ साउन । पृथ्वीको सायदै त्यस्तो ठाउँ होला जहाँ मानवले फोहर नफ्याकेको होस् । अब चन्द्रमामा पनि यसबाट अछुतो रहेन । चन्द्रमाको सतहमा ७ सय ९६ मानवनिर्मित बस्तु छाडिएको नासाले जनाएकोछ । ती मध्य ७ सय ६५ अर्थात ९६ प्रतिशत अमेरिकी चन्द्र अभियानका क्रममा छाडिएका हुन् । यद्यपी ती बस्तुहरु चन्द्रमामा कहाँ छन् भन्न नसकिने अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले जनाएको छ ।..
बालिका बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गर्ने शिक्षक पक्राउ
काठमाडौँ, ९ साउन । पोखराको एक होटलमा बालिकालाई बन्धक बनाइ जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन । मोरङ बिराटनगर घर भई हाल उदयपुर चौदण्डी नगरपालिका–७ बस्ने म्यारीगोल्ड सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक राकेश कुमार कानोडियालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए । उदयपूर बस्ने १४ बर्षीया नाबालिकालाई लेकसाइडको द कन्ट्री यार्ड होटलको एक कोठामा..
Results 598: You are at page5of 20